Booliska Gobolka Mudug oo Gacanta ku Dhigay Dhalinyaro Tahriib Qorshaynayay – Radio Daljir
Booliska Gobolka Mudug oo Gacanta ku Dhigay Dhalinyaro Tahriib Qorshaynayay
Diseembar 24, 2015 10:49 b 0
Khamiis, December 24, 2015 (Daljir) — Ciidanka booliiska gobolka Mudug ayaa maanta qabtay gaaro nooca Soomaalidu utaqaa Nohada oo ay saarnayeen dhalinyaro Tahriibayaal.
Dhalinyarada oo tiradooda gaaraysay 16 qof ayaa isugu jiray Rag iyo Dumar, waxayna Taliska ciidanku booliiska iyo Maamulka Gaalkacyo ay sheegeen inay ahaayeen Tahriibayaal kusii jeeday wadamada Carabta.
Taliyaha qaybta Booliiska gobolka Mudug Cabdirishiid Xaashi Gabi-Gabi ayaa sheegay in 16 ka dhalinyarada ah 4 kamida ay yihiin Gabdho, wuxuuna tilmaamay in Dhalinyarada qaarkood waalidiintood gacan kusiiyeen inay wadan kale u Tahriibaan.
Gaba gabi ayaa xusay inay Tahriibta la dagaalami doonaan, cidkasta oo tahriib lagu qabtana xabsiga la dhigo,isagoo ugu baaqay maamul gobolka inay sharci ka soo saaraan baabuurta qaada Tahriibta,wuxuuna dowladda ka codsaday in xeer laga soo saaro.
Inta badan dhalinyarada ka tahriibta Soomaaliya ayaa aada wadamada Yurub,kuwaas oo maanka gashada inay helayaan nolol dhaanta mida ay ku noolyihii,balse intooda badan ayaa dib uga shalaaya safarka dheer oo ay galeen, kadib markii waayaan noloshii ay ku naalooyayeen.
Madaxweyne Gaas oo Daah-Furay Sanduuqa horumarinta G.Mudug
Caalamka oo Indhaha ku hayo Abaaro daran oo ku dhuftay Qaar kamid ah dalalka Afrika